"ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ မဖြစ်ဘဲ အမျိုးသမီးတွေမှာမှ ဖြစ်တာမို့ ဒါကို ဂုဏ်ယူသင့်တယ်" လို့ ဆိုလာတဲ့ ပန်းကလေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် "Henriette Ceyrac" - For her Myanmar
အယူအဆအလွဲတွေနဲ့ ဓမ္မတာလာခြင်းဟာ ရှက်စရာလို့ ထင်မြင်နေကြတဲ့အပေါ် သူ(မ)ရဲ့ အမြင်တွေက…
ယောင်းတို့ရေ … လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာ ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ် “So What !?” ဆိုတဲ့ campaign လေးကို Stella သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ campaign ကေ ဓမ္မတာ လာတာ သဘာဝပဲ..အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတဲ့ အမြင်ကို ဖော်ပြတဲ့ Campaign ပါ ယောင်းတို့ရေ… ဒီနိုင်ငံက လူတော်တော်များများ ရှက်စရာလို့မြင်ကြတဲ့ ရာသီလာခြင်းကို လူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတာမြင်တော့ Stella လည်း စိတ်ဝင်စားတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ campaign ကို ဦးဆောင်သူ တစ်ဖြစ်လဲ “ပန်းကလေး” ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့ Henriette Ceyrac နဲ့ အမေးအဖြေလေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြလဲ ဆိုတော့…
Q : Henriette အကြောင်းလေးနည်းနည်းလောက် မိတ်ဆက်ပေးလို့ ရမလား ?
A : ကျွန်မနာမည်ကတော့ Henriette Ceyrac လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မက ပြင်သစ်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။ ပြင်သစ်နဲ့ လန်ဒန်က Unilever ကုမ္မဏီရဲ့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှာ တော်တော်ကြာအောင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီး NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PSI မှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ အဲ့မှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေကို အများကြီး သိလာရတာပါ။ အခုတော့ “ပန်းကလေး” ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူအနေနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် “So What !?” campaign လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။
Related Article >>> အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ မသန္တာလှိုင်ပြောပြတဲ့ အကြံပြုချက် (၃) ချက်
Q : “So What !?” Campaign ကို စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး ရှင်းပြပေးပါဦး။
A : ကျွန်မအလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရန်ကုန်ကနေ ကျေးလက်ဒေသတွေကို သွားရတော့ အဲ့ဒီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ(မ) ဓမ္မတာလာနေလို့ ခေါင်းလျှော်လို့မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒီလိုမျိုးကြားဖူးတာ ကျွန်မအတွက် ပထမဆုံးပဲ။ ဘာလို့ ဓမ္မတာလာနေတုန်း ခေါင်းလျှော်လို့မရတာလဲလို့ သူ(မ)ကိုမေးတော့ ဓမ္မတာလာနေတုန်း ခေါင်းလျှော်မိရင် သွေးခဲပြီး သေတတ်တယ်လို့ ကျွန်မကို ပြောပြတယ်။ အစကတော့ ကျွန်မအတွက် သူ(မ)အဖြေက ရယ်စရာကောင်းတယ်။ နောက်နေတယ်ထင်တာကိုး။
ဒါပေမဲ့ သူ(မ)ကို ကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ကို သွေးခဲသေမှာကြောက်ပြီး အတည်ပြောနေတာ။ ဒါရယ်စရာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သေချာလိုက်မေးကြည့်တော့မှ ဓမ္မတာလာနေတုန်းဆို ဟိုဟာမစားရဘူး ဒီဟာမစားရဘူး ဘာမလုပ်ရဘူး ညာမလုပ်ရဘူးဆိုတာတွေ အများကြီးထွက်လာတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဒါတွေကို မြန်မာအမျိုးသမီးအများစုက ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင် ဓမ္မတာလာတာ ဘာလဲဆိုတာ သူတို့သေချာနားမလည်လို့ဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာတယ်။ မြန်မာမိန်းကလေးအများစုက သူတို့ဓမ္မတာလာတဲ့အကြောင်းကို သူတို့မိခင်အရင်းနဲ့တောင် တိုင်ပင်ရမှာ ရှက်ကြတယ်ဆိုပဲ။ အဲ့အတွက် ကျွန်မစိတ်ပူတယ်။ ထိတ်လန့်မိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ဒီအယူအဆအမှားတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့၊ အမျိုးသမီးတွေကို ဓမ္မတာလာခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပညာပေးဖို့နဲ့ ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်လာအောင် ရှင်းပြပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
Q : Henriette အနေနဲ့ ဓမ္မတာလာခြင်းအပေါ်မှာထားတဲ့အမြင်လေးကို ပြောပြပေးပါဦး။
A : ကျွန်မအတွက်တော့ ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေအတွက် သူ(မ) အရွယ်ရောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာကြောင်း သက်သေပဲ။ ကျွန်မကတော့ ရာသီပန်းပွင့်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလို့မြင်တယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ…သန္ဓေသားလောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပေးဖို့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သားအိမ်နံရံကွာကျသွားလို့သာ ရာသီသွေးအဖြစ်ဆင်းသွားရတာ။ တကယ်လို့များ သန္ဓေအောင်တယ်ဆို ဒီသွေးတွေကပဲ သန္ဓေသားလောင်းကို အာဟာရတွေပေးမှာ။ ဒီသွေးဟာ လူသားတွေမျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အသက်သွေးပဲ။ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဒီသွေးကို လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီလိုလှပအံ့ဩစရာအချက်ကို ဘယ်သူမှ ငြင်းပယ်လို့မရဘူး။ ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာကလည်း လူတိုင်းမှာ ဖြစ်တာမှ မဟုတ်ပဲ။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေမှာပဲဖြစ်တာ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဓမ္မတာလာတာကို သိပ်ဂုဏ်ယူသင့်တာပေါ့။
Q : ဓမ္မတာလာတာကို ရှက်စရာတစ်ခုလို မြင်နေကြတဲ့ လူအများစုအတွက် ပညာပေးဖို့ အစီအစဉ်ကရော ဘယ်လိုရှိလဲ?
A : ဟုတ်တယ်…အခုချိန်ထိ ဓမ္မတာလာတာကို ရှက်စရာအဖြစ်မြင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ မပြောနဲ့။ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာတောင် ရာသီလာတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အသိဉာဏ်မရှိကြသေးတာတွေ တွေ့ရတယ်။ ရာသီသွေးကို ညစ်ပတ်တယ် ထင်ကြတယ်၊ ဓမ္မတာလာတဲ့အကြောင်းကို ပြောရမှာ ရှက်ကြောက်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ရာသီသွေးက ညစ်ပတ်ရွံရှာစရာကောင်းတဲ့သွေးမဟုတ်ဘူး။ အနံ့ထွက်တယ်ဆိုတာတွေကလည်း ရာသီသွေးမှမဟုတ်ဘူး ဘယ်သွေးမဆို လေနဲ့ဓာတ်ပြုရင် သွေးနံ့ထွက်မှာပဲ။
လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေ ပါဝင်တဲ့ ရာသီသွေးက တခြားသွေးတွေထက်တောင် သန့်သေးတယ်။ ဒါကို လူတွေနားလည်လာအောင်ဆိုရင် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အရင်ဆုံးဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်တွေကို ပညာပေးဖို့လိုတယ်။ အယူအဆအမှားတွေ ခေါင်းထဲစွဲနေတဲ့ လူကြီးတွေကို ဒါမှားပါတယ်လို့ပြောပြပြီး သင်ဖို့က ခက်ခဲတယ်လေ။
ဒါကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း သက်လတ်ပိုင်း သက်ကြီးပိုင်းတွေကို ပညာပေးသွားမယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဓမ္မတာလာပြီဆို အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဖြစ်တာ မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘတွေကိုလည်း သမီးမိန်းကလေးရာသီလာရင် ဘာတွေဘယ်လိုညွှန်ကြားသင်ပြပေးရမယ့်အကြောင်းတွေ သင်ပေးရမယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျောင်းတွေပေါ့။ မျိုးဆက်သစ်တွေကို သင်ကြားပေးနေတာ အခြေခံကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းတွေမှာလည်း ဓမ္မတာလာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကို သေချာရှင်းလင်းသင်ပြပေးဖို့လိုတယ်။ အနုပညာရှင်တွေကလည်း လူထုကို တော်တော်လေးလွှမ်းမိုးမှုရှိတာကြောင့် သူတို့ကတစ်ဆင့်လည်း ပညာပေးမယ်။ ဆေးရုံတွေ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းနဲ့လည်း ပူးပေါင်းသွားမှာပါ။
ကျွန်မသိသလောက်တော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးယုံကြည်တဲ့ အယူအဆအမှားတွေက ရာသီလာနေတုန်း ခေါင်းမလျှော်ရဘူး၊ လက်ဖက်မစားရဘူး၊ အအေးစာတွေ မစားရဘူးဆိုတာတွေပေါ့။ ဒါတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူစုံတက်စုံဆီက ဖျောက်ဖျက်ဖို့ဆိုရင် UN လို အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မိဘတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေ၊ ဆရာဝန်တွေဆီက အကူအညီတွေလည်း ယူရမှာပေါ့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းက ပညာပေးတာကို လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာပါ။
Q : ဓမ္မတာလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဗဟုသုတမရှိရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ?
A : အရင်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနည်းလာတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိရင် ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ။ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေက ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုများတာကို တွေ့ရတယ်။ ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျောင်းတွေ လုပ်ငန်းခွင်တွေကို သွားချင်စိတ်မရှိကြဘူး။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ဓမ္မတာလာပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ထဲမှာပဲ နေကြတော့တယ်။ အလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ Self esteem မရှိတော့ဘူး။
နောက်တစ်ခုက ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခါသုံး pad တွေကို လေးနာရီခြားတစ်ခါလဲရမယ်၊ မိန်းမကိုယ်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမရှိတဲ့အခါ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါတွေ၊ သားအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်တာပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်က ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ရောဂါတွေကို ခံစားနေရတယ်။ မိနစ်တိုင်းမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးနေရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းခံက ဓမ္မတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးအသိမရှိလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် လူတွေဓမ္မတာလာခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်လာပြီး ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရှိလာအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ပညာပေးကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့အားလုံးကြိုးစားရမှာပါ။
Q : မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ For Her Myanmar ပရိသတ်တွေကိုကော ဘာများပြောချင်တာရှိလဲ ?
A : ဓမ္မတာလာတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ အယူအဆအမှားတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါ။ တကယ်တမ်း ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးအသိရှိအောင်လုပ်ပါ။ ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာ ညစ်ပတ်ရွံရှာစရာမဟုတ်ဘဲ အင်မတန်ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မို့ အမျိုးသမီးတိုင်းဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Henriette ပြောပြသွားတဲ့ ဓမ္မတာအယူအဆအမှားတွေနဲ့ သူ(မ)ရဲ့ “So What !?” campaign က ဒီအယူအဆအမှားတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ နောက်ပြီး Tedx Yangon မှာ “We need to talk about Menstruation” (ဓမ္မတာလာခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်မတို့ ပြောဖို့ လိုနေပါပြီ) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ Henriette ပြောပြသွားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း ယောင်းတို့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောင်းတို့ရော.. ဓမ္မတာလာတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို မြင်ကြလဲ? ယောင်းတို့ရဲ့ အမြင်လေးတွေ ကွန်မန့်မှာ ဆွေးနွေးပေးသွားဦးနော်..
အယူအဆအလှဲတှနေဲ့ ဓမ်မတာလာခွငျးဟာ ရှကျစရာလို့ ထငျမွငျနကွေတဲ့အပျေါ သူ(မ)ရဲ့ အမွငျတှကေ…
ယောငျးတို့ရေ … လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပတျလောကျက ပွငျသဈယဉျကြေးမှုဌာနမှာ ပွုလုပျတဲ့ နိုငျငံတကာအမြိုးသမီးမြားနအေ့ထိမျးအမှတျ “So What !?” ဆိုတဲ့ campaign လေးကို Stella သှားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီ campaign ကေ ဓမ်မတာ လာတာ သဘာဝပဲ..အဲ့တော့ ဘာဖွဈလဲ ဆိုတဲ့ အမွငျကို ဖျောပွတဲ့ Campaign ပါ ယောငျးတို့ရေ… ဒီနိုငျငံက လူတျောတျောမြားမြား ရှကျစရာလို့မွငျကွတဲ့ ရာသီလာခွငျးကို လူအမြားကွီးရှိတဲ့နရောမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆှေးနှေးတာမွငျတော့ Stella လညျး စိတျဝငျစားတာကွောငျ့ နောကျတဈနမှေ့ာ campaign ကို ဦးဆောငျသူ တဈဖွဈလဲ “ပနျးကလေး” ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ founder ဖွဈတဲ့ Henriette Ceyrac နဲ့ အမေးအဖွလေေးလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဘာတှေ ပွောဖွဈခဲ့ကွလဲ ဆိုတော့…
Q : Henriette အကွောငျးလေးနညျးနညျးလောကျ မိတျဆကျပေးလို့ ရမလား ?
A : ကြှနျမနာမညျကတော့ Henriette Ceyrac လို့ချေါပါတယျ။ ကြှနျမက ပွငျသဈလူမြိုးတဈယောကျပါ။ ပွငျသဈနဲ့ လနျဒနျက Unilever ကုမ်မဏီရဲ့ ဈေးကှကျမွှငျ့တငျရေးအဖှဲ့မှာ တျောတျောကွာအောငျ အလုပျလုပျခဲ့သူပေါ့။ လှနျခဲ့တဲ့ သုံးနှဈလောကျက ဖှံဖွိုးဆဲနိုငျငံတဈခုဖွဈတဲ့ မွနျမာပွညျကိုရောကျလာပွီး NGO အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ PSI မှာ အလုပျလုပျတယျ။ အဲ့မှာ အလုပျလုပျနတေုနျး မွနျမာနိုငျငံအကွောငျးတှေ မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှုဓလတှေ့ကေို အမြားကွီး သိလာရတာပါ။ အခုတော့ “ပနျးကလေး” ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ တာဝနျရှိသူအနနေဲ့ မွနျမာအမြိုးသမီးတှအေတှကျ “So What !?” campaign လှုပျရှားမှုတှေ လုပျနပေါတယျ။
Related Article >>> အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျဖို့ မသန်တာလှိုငျပွောပွတဲ့ အကွံပွုခကျြ (၃) ခကျြ
Q : “So What !?” Campaign ကို စလုပျဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးလေး ရှငျးပွပေးပါဦး။
A : ကြှနျမအလုပျကိစ်စနဲ့ ရနျကုနျကနေ ကြေးလကျဒသေတှကေို သှားရတော့ အဲ့ဒီမှာတှခေဲ့တဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက သူ(မ) ဓမ်မတာလာနလေို့ ခေါငျးလြှျောလို့မရဘူးလို့ ပွောတယျ။ ဒီလိုမြိုးကွားဖူးတာ ကြှနျမအတှကျ ပထမဆုံးပဲ။ ဘာလို့ ဓမ်မတာလာနတေုနျး ခေါငျးလြှျောလို့မရတာလဲလို့ သူ(မ)ကိုမေးတော့ ဓမ်မတာလာနတေုနျး ခေါငျးလြှျောမိရငျ သှေးခဲပွီး သတေတျတယျလို့ ကြှနျမကို ပွောပွတယျ။ အစကတော့ ကြှနျမအတှကျ သူ(မ)အဖွကေ ရယျစရာကောငျးတယျ။ နောကျနတေယျထငျတာကိုး။
ဒါပမေဲ့ သူ(မ)ကို ကွညျ့လိုကျတော့ တကယျကို သှေးခဲသမှောကွောကျပွီး အတညျပွောနတော။ ဒါရယျစရာမဟုတျတော့ဘူးလေ။ ဒီအကွောငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး သခြောလိုကျမေးကွညျ့တော့မှ ဓမ်မတာလာနတေုနျးဆို ဟိုဟာမစားရဘူး ဒီဟာမစားရဘူး ဘာမလုပျရဘူး ညာမလုပျရဘူးဆိုတာတှေ အမြားကွီးထှကျလာတယျ။ အဲ့တော့ ကြှနျမစိတျထဲ ဒါတှကေို မွနျမာအမြိုးသမီးအမြားစုက ယုံကွညျနတေယျဆိုရငျ ဓမ်မတာလာတာ ဘာလဲဆိုတာ သူတို့သခြောနားမလညျလို့ဖွဈမှာပဲဆိုတဲ့ အတှေးဝငျလာတယျ။ မွနျမာမိနျးကလေးအမြားစုက သူတို့ဓမ်မတာလာတဲ့အကွောငျးကို သူတို့မိခငျအရငျးနဲ့တောငျ တိုငျပငျရမှာ ရှကျကွတယျဆိုပဲ။ အဲ့အတှကျ ကြှနျမစိတျပူတယျ။ ထိတျလနျ့မိတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျမ ဒီအယူအဆအမှားတှကေို ဖယျရှားပဈဖို့၊ အမြိုးသမီးတှကေို ဓမ်မတာလာခွငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး ပညာပေးဖို့နဲ့ ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာ ရှကျစရာမဟုတျဘူးဆိုတာ နားလညျလာအောငျ ရှငျးပွပေးဖို့ ကွိုးစားနတောပါ။
Q : Henriette အနနေဲ့ ဓမ်မတာလာခွငျးအပျေါမှာထားတဲ့အမွငျလေးကို ပွောပွပေးပါဦး။
A : ကြှနျမအတှကျတော့ ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာ ရှကျစရာတဈခုမဟုတျခဲ့ဘူး။ ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာ မိနျးကလေးတှအေတှကျ သူ(မ) အရှယျရောကျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးဖွဈလာကွောငျး သကျသပေဲ။ ကြှနျမကတော့ ရာသီပနျးပှငျ့တယျဆိုတာ အမြိုးသမီးတဈယောကျအတှကျ အရမျးအံ့ဩဖို့ကောငျးတဲ့ အဖွဈအပကျြတဈခုလို့မွငျတယျ။
စဉျးစားကွညျ့လေ…သန်ဓသေားလောငျးအတှကျ လိုအပျတဲ့အာဟာရတှပေေးဖို့ တညျဆောကျထားတဲ့ သားအိမျနံရံကှာကသြှားလို့သာ ရာသီသှေးအဖွဈဆငျးသှားရတာ။ တကယျလို့မြား သန်ဓအေောငျတယျဆို ဒီသှေးတှကေပဲ သန်ဓသေားလောငျးကို အာဟာရတှပေေးမှာ။ ဒီသှေးဟာ လူသားတှမြေိုးဆကျပွနျ့ပှားဖို့ လိုအပျတဲ့ အသကျသှေးပဲ။ လူသားတဈယောကျဖွဈလာဖို့ ဒီသှေးကို လိုအပျတယျဆိုတဲ့ ဒီလိုလှပအံ့ဩစရာအခကျြကို ဘယျသူမှ ငွငျးပယျလို့မရဘူး။ ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာကလညျး လူတိုငျးမှာ ဖွဈတာမှ မဟုတျပဲ။ ကြှနျမတို့အမြိုးသမီးတှမှောပဲဖွဈတာ။ ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ ဓမ်မတာလာတာကို သိပျဂုဏျယူသငျ့တာပေါ့။
Q : ဓမ်မတာလာတာကို ရှကျစရာတဈခုလို မွငျနကွေတဲ့ လူအမြားစုအတှကျ ပညာပေးဖို့ အစီအစဉျကရော ဘယျလိုရှိလဲ?
A : ဟုတျတယျ…အခုခြိနျထိ ဓမ်မတာလာတာကို ရှကျစရာအဖွဈမွငျနကွေတဲ့သူတှရှေိတယျ။ ကြေးလကျဒသေတှမှော မပွောနဲ့။ မွို့ကွီးပွကွီးတှမှောတောငျ ရာသီလာတာနဲ့ ပကျသကျပွီး အသိဉာဏျမရှိကွသေးတာတှေ တှရေ့တယျ။ ရာသီသှေးကို ညဈပတျတယျ ထငျကွတယျ၊ ဓမ်မတာလာတဲ့အကွောငျးကို ပွောရမှာ ရှကျကွောကျကွတယျ။ တကယျတော့ ရာသီသှေးက ညဈပတျရှံရှာစရာကောငျးတဲ့သှေးမဟုတျဘူး။ အနံ့ထှကျတယျဆိုတာတှကေလညျး ရာသီသှေးမှမဟုတျဘူး ဘယျသှေးမဆို လနေဲ့ဓာတျပွုရငျ သှေးနံ့ထှကျမှာပဲ။လူသားတဈယောကျဖွဈလာဖို့ လိုအပျတဲ့အာဟာရတှေ ပါဝငျတဲ့ ရာသီသှေးက တခွားသှေးတှထေကျတောငျ သနျ့သေးတယျ။
ဒါကို လူတှနေားလညျလာအောငျဆိုရငျ ကြှနျမတို့အနနေဲ့ အရငျဆုံးဆယျကြျောသကျအရှယျ လူငယျတှကေို ပညာပေးဖို့လိုတယျ။ အယူအဆအမှားတှေ ခေါငျးထဲစှဲနတေဲ့ လူကွီးတှကေို ဒါမှားပါတယျလို့ပွောပွပွီး သငျဖို့က ခကျခဲတယျလေ။
ဒါကွောငျ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျတှကေနေ တဖွညျးဖွညျးခငျြး သကျလတျပိုငျး သကျကွီးပိုငျးတှကေို ပညာပေးသှားမယျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျ ဓမ်မတာလာပွီဆို အရငျဆုံးတိုငျပငျဖွဈတာ မိခငျဖွဈတဲ့အတှကျ မိဘတှကေိုလညျး သမီးမိနျးကလေးရာသီလာရငျ ဘာတှဘေယျလိုညှနျကွားသငျပွပေးရမယျ့အကွောငျးတှေ သငျပေးရမယျ။
နောကျတဈခုက ကြောငျးတှပေေါ့။ မြိုးဆကျသဈတှကေို သငျကွားပေးနတော အခွခေံကြောငျးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ကြောငျးတှမှောလညျး ဓမ်မတာလာခွငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ဗဟုသုတတှကေို သခြောရှငျးလငျးသငျပွပေးဖို့လိုတယျ။ အနုပညာရှငျတှကေလညျး လူထုကို တျောတျောလေးလှမျးမိုးမှုရှိတာကွောငျ့ သူတို့ကတဈဆငျ့လညျး ပညာပေးမယျ။ ဆေးရုံတှေ ကနျြးမာရေးဆေးပေးခနျးနဲ့လညျး ပူးပေါငျးသှားမှာပါ။ကြှနျမသိသလောကျတော့ မွနျမာအမြိုးသမီးတှအေမြားဆုံးယုံကွညျတဲ့ အယူအဆအမှားတှကေ ရာသီလာနတေုနျး ခေါငျးမလြှျောရဘူး၊ လကျဖကျမစားရဘူး၊ အအေးစာတှေ မစားရဘူးဆိုတာတှပေေါ့။
ဒါတှကေို မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ လူစုံတကျစုံဆီက ဖြောကျဖကျြဖို့ဆိုရငျ UN လို အဖှဲ့အစညျးတှေ၊ မိဘတှေ၊ ဆရာဆရာမတှေ၊ ဆရာဝနျတှဆေီက အကူအညီတှလေညျး ယူရမှာပေါ့။ တဈဦးတဈယောကျခငျြးက ပညာပေးတာကို လကျခံမယျဆိုရငျတော့ ဒီထကျပိုအကြိုးသကျရောကျမှုရှိမှာပါ။
Q : ဓမ်မတာလာတဲ့အကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး မှနျကနျတဲ့ ဗဟုသုတမရှိရငျ ဘယျလိုဆိုးကြိုးတှဖွေဈလာနိုငျလဲ ?
A : အရငျဆုံးကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုနညျးလာတာပေါ့။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုမရှိရငျ ဘာမှလုပျလို့မရတော့ဘူးလေ။ မွနျမာနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှကေ ဓမ်မတာလာတာနဲ့ ပကျသကျပွီး အရမျးစိတျဖိစီးမှုမြားတာကို တှရေ့တယျ။ ဓမ်မတာလာနတေဲ့အခြိနျတှမှော ကြောငျးတှေ လုပျငနျးခှငျတှကေို သှားခငျြစိတျမရှိကွဘူး။ မွနျမာအမြိုးသမီးတှရေဲ့ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက ဓမ်မတာလာပွီဆိုတာနဲ့ အိမျထဲမှာပဲ နကွေတော့တယျ။ အလုပျမလုပျခငျြတော့ဘူး။ Self esteem မရှိတော့ဘူး။
နောကျတဈခုက ဓမ်မတာလာတာနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈခါသုံး pad တှကေို လေးနာရီခွားတဈခါလဲရမယျ၊ မိနျးမကိုယျကို သနျ့ရှငျးအောငျထားရမယျဆိုတဲ့ ကနျြးမာရေးဗဟုသုတမရှိတဲ့အခါ ဆီးလမျးကွောငျးရောဂါတှေ၊ သားအိမျနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါတှေ ဖွဈတတျတာပေါ့။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ လေးပုံတဈပုံလောကျက ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတဲ့ရောဂါတှကေို ခံစားနရေတယျ။ မိနဈတိုငျးမှာ သားအိမျခေါငျးကငျဆာကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျသဆေုံးနရေပါတယျ။ ဒါတှရေဲ့ အဓိကအကွောငျးခံက ဓမ်မတာနဲ့ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးအသိမရှိလို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ လူတှဓေမ်မတာလာခွငျးအပျေါအာရုံစိုကျလာပွီး ကနျြးမာရေးဗဟုသုတရှိလာအောငျ အတတျနိုငျဆုံး ပညာပေးကာကှယျနိုငျဖို့ ကြှနျမတို့အားလုံးကွိုးစားရမှာပါ။
Q : မွနျမာအမြိုးသမီးတှဖွေဈတဲ့ For Her Myanmar ပရိသတျတှကေိုကော ဘာမြားပွောခငျြတာရှိလဲ ?
A : ဓမ်မတာလာတာ ရှကျစရာမဟုတျပါဘူး။ အယူအဆအမှားတှကေို ခေါငျးထဲကထုတျလိုကျပါ။ တကယျတမျး ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးအသိရှိအောငျလုပျပါ။ ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာ ညဈပတျရှံရှာစရာမဟုတျဘဲ အငျမတနျထူးခွားအံ့ဩဖှယျကောငျးတဲ့ဖွဈစဉျမို့ အမြိုးသမီးတိုငျးဂုဏျယူသငျ့ပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
ဒါကတော့ Henriette ပွောပွသှားတဲ့ ဓမ်မတာအယူအဆအမှားတှနေဲ့ သူ(မ)ရဲ့ “So What !?” campaign က ဒီအယူအဆအမှားတှကေို ဘယျလိုတိုကျဖကျြဖို့ ကွိုးစားနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျးတှပေါပဲ။ နောကျပွီး Tedx Yangon မှာ “We need to talk about Menstruation” (ဓမ်မတာလာခွငျးအကွောငျးကို ကြှနျမတို့ ပွောဖို့ လိုနပေါပွီ) ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ Henriette ပွောပွသှားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုလညျး ယောငျးတို့ ကွညျ့ရှုနိုငျဖို့ တဈခါတညျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ယောငျးတို့ရော.. ဓမ်မတာလာတယျဆိုတာကို ဘယျလို မွငျကွလဲ? ယောငျးတို့ရဲ့ အမွငျလေးတှေ ကှနျမနျ့မှာ ဆှေးနှေးပေးသှားဦးနျော..
Tags: Heneritte, Interview, Menstruation, Pan Ka Lay, Period
Ana June 5, 2019
Ana May 27, 2019
Ana May 9, 2019
Ana March 18, 2019